Oyo! Mitady fianarana izahay. | mandimby maharo
Oyo! Mitady fianarana izahay.	Posted on 7 September 2016 by Mandimby Maharo	Hiverina an-tsekoly indray ny mpianatra rehefa avy niala sasatra nandritra ny herinandro maromaro. Somebiseby ery ny ray aman-dreny mitady ny fitaovana, mitady ny sekoly ampianarana ireo zaza madinika. “Aiza no akaiky? Aiza no tsara? Mampahay ve ao? Aleo atsy fa ao moramora kokoa ny saram-pianarana, na aleo aroa fa any mba manaraka ny rafim-pianaran’ny fanjakana. Maro rahateo ny sekoly ankehitriny ary samy manana izay mety aminy ny rehetra. Saingy, ny rehetra tokoa ve? Tsy mba toy izany ny fientanana ho an’ireo ray aman-dreny manana zaza autiste.
Efa hatramin’ny nidiran’ny zanak’izy ireo nianatra no toa lasa tebiteby lava no iainan’izy ireo. “Hanaiky ny hampianatra ny zanako ve ity sekoly ity? Hisy mpampianatra hanaiky hampianatra sy hanokana fotoana sy tena manokana ve hampianatra azy?” Tebiteby toy izany, fivezena sy fandresen-dahatra isaky ky sekoly no tsy maintsy ataon’izy ireo mba haneken’ny sekoly ny handray ny zanany hianatra ao. Tsy misy safidy maro toy ny rehetra hoe izay akaiky, na izay mora, na izay mahay mampianatra fa singa tokana ihany no fepetra : izay sekoly manaiky hampianatra ny zanany dia izay no idirana. Ny zaza autiste tokoa mantsy tsy mba misy sekoly natokana ho azy, ary tsy tokony hisy rahateo ny fanavakavahana azy amin’ny sekoly manokana fa ilainy ny miara-mianatra @ rehetra. Tsy mahay miara-monina @ olona maro tokoa ny autiste, ekena izany, saingy tsy antony tsy ahafahany miara-mianatra amin’ny sekoly hianaran’ny rehetra izany. Ny fametran’ny sekoly ny fenitra ilaina mba ahafahany mianatra ka aharaka ny fampianarana no ilaina. Indrisy, ny zaza autiste no voatery miezaka ny hiditra ao anatin’ireny sekoly ireny fa vitsy ny sekoly no miezaka ny handray azy ireo.
Zon’ny zaza ny mianatra. Zo tsy anavakavahana io. Nefa hatreto aloha dia tsy mbola mizaka izany zo izany ny zaza autiste malagasy fa mbola iharan’ny fanavakavahana sy fanilikilihan’ny sekoly satria “manelingelina” ny zaza hafa tsy toa azy…
Tags: AutismeCategories: societé